के मानवता हराउदै गएको हो त ? मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेलाई सहयोग हैन सेल्फी हान्नमा व्यस्त - Taja Report
Homeसमाचारके मानवता हराउदै गएको हो त ? मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेलाई सहयोग हैन सेल्फी हान्नमा व्यस्त
July 12, 2018 समाचार Comments Off on के मानवता हराउदै गएको हो त ? मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेलाई सहयोग हैन सेल्फी हान्नमा व्यस्त
उक्त घटनास्थलमा तस्विर खिच्ने व्यक्तिहरुका तस्विर भारतीय सामाजिक संन्जलामा भाइरलनै बनेको छ। सामाजिक संजालमा ती व्यक्तिहरुको तिब्र आलोचना पनि भएको देख्न सकिन्छ। कहिले यसलाई अमानवीय प्रबृत्ति भनेर टिप्पणी समेत गरेका छन्
#BREAKING….मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड मा अर्को दुखद खबर …सक्दो शेयर गरौ
अझै तीन दिन देशभर वर्षा हुने : सचेत रहन आग्रह , यो यो ठाउँमा खतरा हुन सक्ने